Multitran ရုရှအဘိဓါန် APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » Multitran ရုရှအဘိဓါန်
Multitran ရုရှအဘိဓါန် APK ကို
ဒါဟာသင်အတော်ကြာဘာသာစကားများဘာသာပြန်ချက်များကိုရှာတှေ့နိုငျရှိရာအကြီးဆုံးရုရှအဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘိဓာန်သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌အသုံးပြုနိုင်သည်စကားလုံးများကိုပါရှိသည်မဟုတ်ပဲ, ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးခက်ခဲတည်ဆောက်မှုများ, သင်တန်းသည့်အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာသင်အသုံးပြုစကားလုံးများကို (စီးပွားရေး, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သမိုင်း, Technical) ကဲ့သို့သင်အဘိဓါန်ထံမှမျှော်လင့်ထားဘာမှလုပ်နိုင်ပေမယ့် ပိုပြီးလည်းမရှိ: ဒါဟာအစတစ်ခုကျယ်ပြန့်စကားလုံးသင်တန်းဆရာရှိပါတယ်! ဤသည်မှသင်တန်းဆရာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဘိဓါန်မှစကားအလုံးစုံတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသင်တန်းဆရာတွေနဲ့အဲဒီစကားလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, ဆိုလိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှု, သင့်နားထောင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှု, သင့်အသံထွက်, သင်၏စာဖတ်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှု: အဆိုပါစကားလုံးသင်တန်းဆရာကိုသင်လိုအပ်သမျှသောလေ့ကျင့်စေသည်ရသောကွဲပြားခြားနားသောလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းတဲ့အခါမှာ app ကိုမရှိမဖြစ်ကြောင်းစေသည်! ဒါဟာမဆိုအဆင့်သင့်လျော်သည်။
အင်္ဂလိပ် - ရုရှအဘိဓါန်
ဂျာမန် - ရုရှအဘိဓါန်
ပြင်သစ် - ရုရှအဘိဓါန်
အီတလီ - ရုရှအဘိဓါန်
စပိန် - ရုရှအဘိဓါန်
ဒတျချြ - ရုရှအဘိဓါန်
- Esperanto ရုရှအဘိဓါန်
တိုးနီးရနျး - ရုရှအဘိဓါန်
အံ - ရုရှအဘိဓါန်
အာဖရိက - ရုရှအဘိဓါန်
Kalmyck - ရုရှအဘိဓါန်
ဂရိ - ရုရှအဘိဓါန်
တရုတ် - ရုရှအဘိဓါန်
နော်ဝေ - ရုရှအဘိဓါန်
ပိုလနျ - ရုရှအဘိဓါန်
ဆွီဒင် - ရုရှအဘိဓါန်
ဂျပန် - ရုရှအဘိဓါန်
1 ။ ကိုယ်ပိုင်အဘိဓါန် - သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဘိဓါန်မှစကားများပေါင်းထည့်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
2 ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အဘိဓါန်စီမံခန့်ခွဲ - သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဘိဓါန်တည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ပါကရှင်းလင်းနိုင်ကြသည်။
3 ။ အမျိုးမျိုးသော Settings - သင် application ရဲ့ဖောင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
4 ။ စာသား-To-Speech module တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီး Word စာလုံးပေါင်း။
5 ။ context စကားလုံးရှာဖွေမှု - ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး၌မဆိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို click နှိပ်ပြီးပါကဘာသာပြန်ချက်ဖွင့်ကိုရှာ။
6 ။ Voice ကို input ကို။
7 ။ စကားတော်ပေါ်နှိပ်စာကြောင်း / စာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူအသေးစိတ်ရှုထော။
8 ။ ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကို။